ဦးနှောက်သို့ထောက်ပံ့ပေးသောသွေးလွှတ်ကြောရောဂါ - Hello Sayarwon
နောက်ပိုင်းနှစ်ကာလတွေမှာ လေဖြတ်ခြင်းဟာ သိသိသာသာကိုတိုးလာတဲ့ရောဂါတစ်ခုဖြစ်တယ်။ လေဖြတ်ခြင်းအများစုဟာ ဦးနှောက်ကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့သွေးလွှတ်ကြော တနည်း မေ့ကြောလို့ခေါ်တတ်ကြတဲ့ carotid artery ရောဂါ ဒါမှမဟုတ် သွေးဝင်ခန်းခုန်နှုန်းမမှန်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နေရပါတယ်။ Carotid artery ရောဂါဟာ သွေးကြောထဲမှာသွေးများခဲကာ ဦးနှောက်ဆီသွေးမရောက်ခြင်းကြောင့်လေဖြတ်ရခြင်းဖြစ်တယ်။
အဓိကကတော့ သွေးလွှတ်ကြောတွေရဲ့ အတွင်းနံရံတွေ ဆက်တိုက်ထိခိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတယ်။ သွေးကြောအတွင်းမှာ စုပုံနေတဲ့အရာတွေက သွေးစီးလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ကာ အထူးသဖြင့်ဦးနှောက်ဆီသို့သွေးရောက်မှုကိုဟန့်တားလိုက်တယ်။ အကြောင်းအရင်းတွေကတော့ –
သွေးတွင်းသကြားဓါတ်၊ အဆီ၊ ကိုလက်စရောတိုးစေသောရောဂါများ၊ ဥပမာ- ဆီးချိုသွေးချို၊ အဝလွန်ခြင်း သို့ အင်ဆူလင်မထိန်းနိုင်ခြင်း။
ထိုအခါ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်က ပျက်စီးမှုတွေပြန်ပြင်ဖို့၊ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့စတင်လာတယ်။ ထိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းကြောင့် သွေးကြောထဲမှာ စုပုံခြင်းတွေဖြစ်လာပြီး သွေးကြောကျဉ်းခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းတို့ ဖြစ်လာတော့တယ်။ ကိုလက်စရော၊ အမျှင်တစ်သျူး၊ ကယ်လ်စီယမ်နဲ့ တခြားဆဲလ်အမှုန်အမွှားများစုကာ ထိခိုက်နေတဲ့သွေးကြောနံရံကိုဖာဖို့ သွေးခဲဖြစ်လာတယ်။ ထိုသွေးခဲကြောင့်ပဲ သွေးကြောကျဉ်းလာပြီး လေဖြတ်ရပါတော့တယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်စောစီးတဲ့အဆင့်တွေမှာ လက္ခဏာတွေမပြတတ်ဘူး။ ပိုအရေးကြီးတာက သွေးကြောတဝက်ပိတ်ချိန် သို့ လုံးဝပိတ်သွားပြီး လေဖြတ်ကာမှ လက္ခဏာတွေပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ အောက်ပါတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် –
များသောအားဖြင့်တခြမ်းကွက်ပြီး မျက်နှာ၊ ခြေ လက်တို့တွင် ထုံခြင်း၊ အားနည်းခြင်း။
မျက်လုံးတစ်ဖက် သို့ နှစ်ဖက်လုံးရုတ်တရတ်မမြင်တော့ခြင်း။
သိနေပြီးသားအတိုင်း ရောဂါတစ်ခုကိုကာကွယ်ရန် ထိုရောဂါဖြစ်နိုင်စေသောအချက်များကိုကာကွယ်ဖို့လိုပါတယ်။ လေဖြတ်ခြင်း၊ ဦးနှောက်သွေးကြောရောဂါတို့မှာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ နေထိုင်မှုပုံစံမမှန်ခြင်းတို့ကဲ့သို့ အချက်များစွာရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်နှလုံးသားအတွက် ကျန်းမာရေးညီညွတ်တဲ့နေထိုင်မှုပုံစံနေသင့်တယ်။
ကျန်းမာရေးညီညွတ်စွာစားခြင်း – ဒါကြားဖူးနေကျပါ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှလည်းအိုဟောင်းမသွားတဲ့အကြံဉာဏ်ပါ။ ကျန်းမာရေးညီညွတ်စွာစားခြင်းဖြင့် နှလုံးရောဂါသာမက တခြားသော သွေးချိုဆီးချို၊ အဝလွန်ခြင်း စသည်တို့ကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းနိုင်ပါက သွေးတွင်းသိကြားဓါတ်များခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ပြီး ဦးနှောက်သွေးကြောရောဂါများကိုလည်းကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေတွေမှာနေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုထဲနဲ့ ရောဂါကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဆရာဝန်ကဆေးများနဲ့ကုသကာ ရောဂါဖြစ်နိုင်စေသည့်အချက်များကိုထိန်းချုပ်ပါလိမ့်မယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ carotid artery ရောဂါခံစားနေရသူတွေဟာ အမေရိကန်ဒေသတွေအပြင် အများကြီးကျော်လာပါပြီ။ နေထိုင်မှုပုံစံမမှန်တဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာထိုရောဂါဖြစ်ပြီးလေဖြတ်ခြင်းတွေဖြစ်လာကြတယ်။ ဒါပေမယ့် နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲပြီး ဆေးသောက်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
Carotid Artery Disease: Causes, Symptoms, Tests, and Treatment. http://www.webmd.com/heart-disease/carotid-artery-disease-causes-symptoms-tests-and-treatment#1. Accessed September 27, 2016.
Carotid Artery Disease. https://medlineplus.gov/carotidarterydisease.html. Accessed September 27, 2016.
How Can Carotid Artery Disease Be Prevented?. https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/catd/prevention. Accessed September 27, 2016.